विद्यार्थीले बनाए सोलारबाट चल्ने पानी जहाज – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
विद्यार्थीले बनाए सोलारबाट चल्ने पानी जहाज
२०७० माघ २८, मंगलवार ०२:४८ गते
भरतपुर । उर्जा समस्या भोगिरहेको नेपाललाई राहत दिने काम गरेका छन् भरतपुरका दुई युवाले । गैंडाकोटको अक्सफोर्ड उच्च माविमा कक्षा ११ मा कम्युटर विज्ञान पढ्दै गरेका रिजन काफ्ले र निसान तिमिल्सिनाले सौर्य उर्जाले चल्ने पानी जहाज तयार गरेका छन् ।
भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ६ र वडा नं. १४ घर भएका काफ्ले र तिमिल्सिनाले बनाएको नमुना जहाजको सोमबार भरतपुरमा प्रदर्शन गरियो । उनीहरुले तयार गरेको सो नमुना पानी जहाज काठमाडौंमा भएको विज्ञान प्रदर्शनीमा समेत उत्कृष्ट ठहरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले माघ २३ र २४ गते काठमाडौंमा राष्ट्रव्यापी मेकानिकल एक्जिविसन आयोजना गरेको थियो । सोसाइटी अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टले प्रदर्शनी आयोजना गरेको थियो ।
प्रदर्शनीमा काफ्ले र तिमिल्सिनाको अन्वेषण उत्कृष्ट ठहरिएको थियो । पहिलो भएर स्वर्ण पदक, शिल्ड र प्रमाणपत्र पाइसकेको उनीहरुको नमुना जहाज सोमबार भरतपुरको एक होटलको स्वीमिङ पुलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदर्शन गरिएको थियो ।
‘व्याट्रीबाट चल्ने जहाज चलाउन सौर्य उर्जाको साहरा लिइएको छ । सोलारबाट व्याट्री चार्ज हुन्छ’ अन्वेषक काफ्लेले भने । जहाजको डिजाइन पानीमा अवरोधहरुलाई पार गर्न सक्ने खालको भएको उनले बताए ।
‘यसको तत्काल व्यवसायिक उत्पादन पनि सम्भव छ’ विद्यार्थी काफ्लेले भने । नेपालका नदी र तलाउहरुमा यसलाई चलाउन सकिने उनले बताए । पानीभन्दा तल भएको अवरोधहरु पनि हेर्न मिल्ने उपकरणहरु यो जहाजमा जडान गरेको उनले बताए ।
‘पानीभन्दा तलको भाग हेर्न सकिन्छ । यसका लागि वायरलेस क्यामरा जडान गरेका छौं’ काफ्लेले जानकारी दिए । यसो भएमा सैनिकहरुले उद्धार कार्यमा पनि यस्ता जहाज उपयोग गर्न सक्ने काफ्लेको भनाइ छ ।
‘यस्तो जहाजमा बसेर दायाँ बायाँ अगाडि–पछाडिमात्रै होइन, पानीभन्दा तलको अवस्था पनि जानकारी लिन सकिन्छ । जहाजको बाटोमा आउने व्यवधानहरु त थाहा हुने नै भयो कुनै दुर्घटनाका बेला उद्धार तथा खोजीमा सेनाहरुले यस्तो जहाज उपयोग गर्दा लाभदायिक हुनेछ’ काफ्लेले भने ।
नेपालमा तत्कालका लागि पर्यटकहरु राख्न यस्ता जहाज उपयोग हुन सक्ने विद्यार्थी तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘अहिले नै धेरैजना मान्छे राखेर रफ्तारमा हिँडाउन त नसकिएला तर पर्यटकीय आकर्षणको जहाज बनाउन भने सकिन्छ’ अन्वेषकमध्येका तिमिल्सिनाले भने ।
सोर्य उर्जा र रिमोटबाट चल्ने नमुना पानी जहाज प्रदर्शन गरिदै ।